ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန် | ShweProperty.com
အကျယ်​အ၀န်း ၃၅x ၅၀။21/2 RC Hall...
အကျယ်​အ၀န်း ၃၅x ၅၀။21/2 RC Hall
Property ID: S-1203230
ရောင်းရန် - Near Mingalar Zay (မင်္ဂလာဈေးအနီး)
*Location – Near Mingalar Zay , Mingalar Taung Nyunt Town ship. *Price – 11000 Lakhs *Property Type — House ( 2RC ) *Area — 2610 sqft *Rooms formation — 2-Bedrooms ,Living room and Kitchen. *Other Features — laminate, 1-bathroom and ready to live located at Mingalar Taung Nyunt Town ship....
*Location – Near Mingalar Zay , Mingalar Taung Nyunt Town ship. *Price – 11000 Lakhs *Property Type — House ( 2RC ) *Area — 2610 sqft *Rooms formation — 2-Bedrooms ,Living room and Kitchen. *Other Features — laminate, 1-bathroom and ready to live located at Mingalar Taung Nyunt Town ship.
Listed 19 July 2019
Property ID: S-1203060
အကျယ်​အ၀န်း ၂၅ x ၅၀။ 1 BN...
အကျယ်​အ၀န်း ၂၅ x ၅၀။ 1 BN
Property ID: S-1203031
အကျယ်​အ၀န်း ၃၀ x ၅၅3RC...
အကျယ်​အ၀န်း ၃၀ x ၅၅3RC
Property ID: S-1203030
ရောင်းရန် - ပြင်ဆင်ပြီး မီနီကွန်ဒို အငှား
Condo For Rent @ Mingalar Taung Nyunt Tsp, * Building Square Feet: 2150sqft * Master Room:2 * Single Room ;2 * Living room * Kitchen * Bathrooms and toilets * Air condition: * Price -$1000...
Condo For Rent @ Mingalar Taung Nyunt Tsp, * Building Square Feet: 2150sqft * Master Room:2 * Single Room ;2 * Living room * Kitchen * Bathrooms and toilets * Air condition: * Price -$1000
Listed 17 July 2019
Near Kandawgyi lake
Property ID: S-1202932
ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရေတွင်းကုန်းရပ်ကွက်ရှိ…
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရေတွင်းကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောလုံးချင်းတိုက်(Malihku Real Estate) မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊…...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရေတွင်းကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောလုံးချင်းတိုက်(Malihku Real Estate) မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊…
Property ID: S-1202890
ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ပုသိမ်လမ်းသွယ်တွင် အုတ်ခံ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်…
Listed 8 July 2019
Property ID: S-1202383
အကျယ်​အ၀န်း ၂၅x၅၀။ 2BN ​နေရာ​ကောင်း။ ...
အကျယ်​အ၀န်း ၂၅x၅၀။ 2BN ​နေရာ​ကောင်း။
Listed 25 June 2019
Property ID: S-1201417
ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တွင်လုံးချင်းရောင်းရန်
မင်္ဂလာတောင်ညွန်မြို့နယ် 108 လမ်းတွင်အကျယ်အဝန်း 1200 sqft ရှိသော2RC အားသိန်း 2700 ညှိနှိုင်းနှင့်ရောင်း ရန်ရှိပါသည်။အိပ်ခန်း…...
မင်္ဂလာတောင်ညွန်မြို့နယ် 108 လမ်းတွင်အကျယ်အဝန်း 1200 sqft ရှိသော2RC အားသိန်း 2700 ညှိနှိုင်းနှင့်ရောင်း ရန်ရှိပါသည်။အိပ်ခန်း…
Listed 16 June 2019
Property ID: S-1200915
​မြေအကျယ်​အ၀န်း ၂၅x၅၀။ 2BN ။...
​မြေအကျယ်​အ၀န်း ၂၅x၅၀။ 2BN ။
Property ID: S-1199133
ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်လုံချင်းရောင်းရန်ရှိသည်။09977901505/09977901500
၁၁၃လမ်းအနီး 30×40 3RC 3BRပါကေး ဂရန် 5000L ရောင်းရှိသည်။...
၁၁၃လမ်းအနီး 30×40 3RC 3BRပါကေး ဂရန် 5000L ရောင်းရှိသည်။
Property ID: S-1195395
ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ယုဇနပလာဇာနီးတွင် 2Rc လုံးချင်းအိမ်…
Property ID: S-1194892
Asking Price : 18,000 သိန်း
ရောင်းရန် - Pathein Nyunt Street (ပုသိမ်ညွှန့်လမ်းသွယ်)
*Location – Pathein Nyunt Street, Mingalar Taungnyunt Township. *Price – 2500 Lakhs *Property Type — House(2BN) *Area — 1250 sqft *Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — RC, 1-Bathroom and ready to live located at Mingalar Taungnyunt Township....
*Location – Pathein Nyunt Street, Mingalar Taungnyunt Township. *Price – 2500 Lakhs *Property Type — House(2BN) *Area — 1250 sqft *Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — RC, 1-Bathroom and ready to live located at Mingalar Taungnyunt Township.
Property ID: S-1194249
ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စက်ရုံလမ်းမအနီး 118 လမ်းရှိ…
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စက်ရုံလမ်းမအနီး 118 လမ်းရှိ လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ ပေအကျယ် - (15 × 40 )' RC ခင်း အိပ်ခန်း…...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စက်ရုံလမ်းမအနီး 118 လမ်းရှိ လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ ပေအကျယ် - (15 × 40 )' RC ခင်း အိပ်ခန်း…
Listed 14 March 2019
စက်ရုံလမ်းမအနီး 118 လမ်း
Property ID: S-1192536
ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ဗညားဒလလမ်း ရှိနေထိုင်ရန်…
GREAT PYI TAW THIT CO.,LTD.
Property ID: S-1190121
Mobile : 01401294,01450944, 01556352, 09250139211
Office no : 01-401294, 01450944, 095051785, 095403148, 0973236
ရောင်းရန် - Myanma Gon Yaung Housings (မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင်အိမ်ရာ)
*Location – Myanma Gon Yaung Housings, Mingalar Taungnyunt Township. *Price – 12900 Lakhs *Property Type — House(3.5RC) *Area — 4000 sqft *Rooms formation — 3-Master Bedrooms, 1-Normal Bedroom, 1-Air Con, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Parquet, 4-Bathrooms and…...
*Location – Myanma Gon Yaung Housings, Mingalar Taungnyunt Township. *Price – 12900 Lakhs *Property Type — House(3.5RC) *Area — 4000 sqft *Rooms formation — 3-Master Bedrooms, 1-Normal Bedroom, 1-Air Con, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Parquet, 4-Bathrooms and…
Myanma Gon Yaung Housings (မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင်အိမ်ရာ)
Property ID: S-1188667
ရောင်းရန် - Code-7249 မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် ဟိုတယ်လိုင်စင်ပါ…
Property ID: S-1184300
Asking Price : 50,000 သိန်း
ရောင်းရန် - PatheinNyunt Street (ပုသိမ်ညွှန့်လမ်းသွယ်)
*Location – PatheinNyunt Street, MingalarTaungnyunt Township *Price – 1700 Lakhs *Property Type – House(2BN) *Area — 1250 sqft *Rooms formation — 2-Normal Bedrooms, 3-Air Con, Living room and Kitchen. *Other features – Laminate & Ceramic, 1-Bathroom, Furnish Kitchen and ready to live located…...
*Location – PatheinNyunt Street, MingalarTaungnyunt Township *Price – 1700 Lakhs *Property Type – House(2BN) *Area — 1250 sqft *Rooms formation — 2-Normal Bedrooms, 3-Air Con, Living room and Kitchen. *Other features – Laminate & Ceramic, 1-Bathroom, Furnish Kitchen and ready to live located…
Listed 1 September 2018
PatheinNyunt Street (ပုသိမ်ညွှန့်လမ်း)
Property ID: S-1170513
ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် မင်္ဂလာဈေးအနီး ရှိအဆင့်မြင့်…
အသင့်နေ,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်...
အသင့်နေ,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်
Property ID: S-1171918
ရောင်းရန် - လုံးခြင်းအိမ် + မြေ အမြန်ရောင်းမည် ။
Listed9July 2018
Advertiser : Mi Mi Ko
Property ID: S-1169695
Office no : 09-420012928 , 09421155523
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်မြန်မာပြည် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
အလုံရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဗဟန်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဗိုလ်တထောင်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ကိုကိုးကျွန်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဒဂုံရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဒလရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဒေါပုံရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်
လှိုင်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်လှိုင်သာယာရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်လှည်းကူးရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်မှော်ဘီရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ထန်းတပင်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်အင်းစိန်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ကမာရွတ်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ကော့မှုးရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ခရမ်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ကွမ်းခြံကုန်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ကျောက်တံတားရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ကျောက်တန်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်
ကြည့်မြင်တိုင်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်လမ်းမတော်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်လသာရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်မရမ်းကုန်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်မင်္ဂလာဒုံရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်မြောက်ဥက္ကလာရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ပန်းပဲတန်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ပုဇွန်တောင်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်စမ်းချောင်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဆိပ်ကမ်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်
ရွှေပြည်သာရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်တောင်ဥက္ကလာရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်တိုက်ကြီးရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်တာမွေရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်သာကေတရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်သံလျင်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်သင်္ဃန်းကျွန်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်သုံးခွရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်တွံတေးရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ရန်ကင်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ရွှေပေါက်ကံရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်ကယားပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်နေပြည်တော်ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများမင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများမင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များမင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
privatehouse, for sale in Mingalartaungnyunt , Yangon